२००० वर्ष पुरानो अनौठो शिवलिंग, जसबाट आउँछ तुलसीको सुगन्ध – Allindiabc
Home/रोचक खबर/२००० वर्ष पुरानो अनौठो शिवलिंग, जसबाट आउँछ तुलसीको सुगन्ध
२००० वर्ष पुरानो अनौठो शिवलिंग, जसबाट आउँछ तुलसीको सुगन्ध
हुन त यस धर्तीमा अनेकौं चमत्कार देख्न पाइन्छ तर शिवलिं गबाट तुलसीको सुगन्ध आउँछ भनी तपाईंले कहिल्यै सुन्नुभएको छैन शायद। भारतको छत्तीसगढ राज्यको सिरपुरमा उत्खननका क्रममा भेटिएको यो अनौठो शिवलिं ग करीब दुई हजार वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरिन्छ।यो शिवलिं ग काशी विश्वनाथ र महाकालेश्वर जस्तै चिल्लो छ। यस अनौठो शिवलिं गको नाम गन्धेश्वर महादेव राखिएको छ ।
अचम्मको कुरा शिवलिं गमा जनै लगाइएको छ। लिं गका साथसाथै केही सिक्का र ताम्रपत्रहरू भेटिएका छन्। शिवलिं गमाथि केही रेखाहरू देखिन्छन्।सबभन्दा अचम्मको कुरा त शिवलिं गबाट तुलसीको सुगन्ध निस्कन्छ। टाढाटाढासम्म पनि सुगन्ध फैलिन्छ।शिवलिं गको दर्शन मात्रले मनोकामना पूरा हुने भक्तहरू विश्वास गर्छन्। यो चार फीट अग्लो र २.५ फीट गोलो छ। अनि दिनको तीनचारचोटि यसको रंग बदलिन्छ । टाढाटाढाबाट मानिसहरू यसको दर्शन गर्न आउँछन्।
अन्य समाचार, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्विकार गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग समेटिएको नक्सा प्रयोगमा ल्याएको हो ।
टेक्सास– अमेरिकी नागरिक थेल्मा चिएका नाम गरेकी एक महिलाले ९ मिनेटमा ६ ओटा बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् ।
उनले शुक्रबार विहान ४ः ५० मिनेटमा पहिलो बच्चा लाई जन्म दिएकी हुन् भने ४ः ५९ मिनेटमा छैठौँ बच्चालाई जन्म दिइन् । ६ वटा बच्चा मध्ये ४ जना छोरा छन् भने २ जना छोरी छन्
अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार बच्चाहरुको वजन ५०० ग्राम देखि ९०० ग्राम सम्मका रहेका छन् । बच्चाहरुको अवस्था स्थीर रहेको छ भने एनआईसीयूमा राखेर बच्चाहरुको उपचार भइरहेको छ । आमाको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।
अन्य समाचार, न्युजिल्याण्ड- ओसेनिया मुलुक न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। नयाँ संक्रमित र सक्रिय केस बाँकी नरहेपछि न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरसमुक्त भएको घोषणा गरेको हो। आइसोलेसनमा राखिएका अन्तिम बिरामीमा ४८ घण्टायता कुनै लक्षण नदेखिएको जनाइएको छ ।
“यो वास्तवमा राम्रो खबर हो,” स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा. अस्ले ब्लुमफिल्डले भने। गत २२ मेमा न्युजिल्यान्डमा कोरोना भाइरसका अन्तिम संक्रमित भेटिएका थिए।
अन्य समाचार, स्याङजा । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा फेरि एक जनाको ज्यान गएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ पुगेको छ । पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा आइतबार कोरोना संक्रमणका कारण आईसोलेसनमा भर्ना गरिएका स्याङ्जाका एक वृद्धको निधन भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जानकारी गराएको छ ।
वालिङ नगरपालिका स्थायी ठेगाना भएका बर्ष ६० का वृद्धको निधन भएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जनाएका छन् । जेठ २३ गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आइतबार कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो । स्याङ्जाबाट छोरीको सम्पर्कमा पोखरा पठाएको र पोखराबाटै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सुरक्षित देखिन्थ्यो । त्यसमा पनि प्रदेश राजधानी पोखरामा त संक्रमण शून्य नै थियो।
तर पछिल्लो केही दिन यता गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ । आइतबार विहानमात्र थप ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । गत शुक्रबार ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भने पोखरेलीमा त्रास फैलिएको थियो । पोखरा नै नछाडेका ती व्यक्ति कसरी संक्रमित भए, यो प्रश्न धेरैलाई टाउको दुखाइ बनेको छ।
आइतबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ हजार ४४८ पुगेको छ । त्यसमध्ये ४६७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।
अन्य समाचार, काठमाडौं – लाखौं नेपालीहरु कार्यरत खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा कोरोना भाइरसले करिव २ लाख ६० हजार संक्रमित भएका छन् ।
कोरोना भाइरस सम्बन्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको साइट वर्ल्डो मिटर्सले शुक्रबार विहान ११ बजेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक (साउदी, कतार, युएई, ओमान, बहराइन र कुवेत ) मा २ लाख ५९ हजार ६९६ जना संक्रमित भएका छन् ।ती मुलुकहरूमा अहिलेसम्म कोरोनाकै संक्रमणले १३६८ जनाको मृत्यु भएको छ । ती मुलुकहरूमा संक्रमितमध्ये १ लाख ६२ हजार ९९६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
संक्रमितमध्ये ६८ हजार ९६५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २३ हजार ५८१ को उपचार भइरहेको छ ।अहिलेसम्म त्यहाँ १ हजार ३६४ जना नेपाली संक्रमित भएका छन् भने १३ जनाको मृत्यु भएको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
मृतक संख्याका आधारमा खाडीका ६ मुलुकमा कोरोनाको चपेटामा पर्ने दोस्रो मुलुक हो युएई ।युएईमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणले २७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बुधबार थप ३ जनाको मृत्यु भएपछि युएईमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या २७३ पुगेको हो ।पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि युएईमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३७ हजार १८ पुगेको छ । त्यसमध्ये १९ हजार ५७२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
युएईमा अहिलेसम्म ५ सय नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा १९ जनाको मृत्यु भएको गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनाएको छ ।यूएईको दुबई सरकारले आर्थिक गतिविधि सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै दुबईमा जारी कर्फ्यूलाई राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै कायम गरेको छ ।
संक्रमित थपिएसँगै कुवेतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या २९ हजार ९२१ जना पुगेको छ । संक्रमितमध्ये १७ हजार २२३ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।एनआरएनएका अनुसार कुवेतमा संक्रमित हुने नेपालीको संख्या ६५० छ भने २ जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ ।
त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अहिलेसम्म कतारमा ६ हजार ९११ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भएका कम्पनीले श्रमिकको खाने बस्ने सुविधा कटाउन नपाउने नियम ल्याएकाले कतारमा कार्यरत नेपालीलाई खासै अप्ठ्यारो नपरेको दूतावासले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले बहराइनमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ १३ हजार २९६ जना संक्रमित भएका छन् ।संक्रमितमध्ये ७ हजार ७२८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ५ हजार ५४७ जनाको उपचार जारी छ ।
कपिलवस्तु- क्‍वारेन्टाइनमा ‘अलपत्र’ कोरोना सं’क्रमितलाई कुनै पनि गाडी र एम्बुलेन्सले ओसार्न नमानेपछि कपिलवस्तुका एक प्रहरी अधिकृत पिपिई लगाएर पिकअप गाडी आफैंले चलाएर उनीहरूलाई आइसोलेसनमा पुर्‍याएका छन् । तीन दिनदेखी ‘अलपत्र’ कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका कोरोना सं’क्रमितलाई प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले उद्धार गरी आइसोलेसन वार्डमा पुर्‍याएका हुन्।
बेवास्ता नगर्नुहोला ! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं
ॐ ॐ ॐ नाग देवताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आज बिहिबारको राशिफल
सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं (7,585)
यी ५ चिज सिरानी मुनी राख्नुहोस् धन लाभ हुनेछ (3,923)